Sarcoidosis လူနာတစ်ဝှမ်း 30% များအတွက်နာတာရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ နာတာရှည်, ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်, အခြေအနေများအဘယ်သူမျှမရောဂါပျောက်ကင်းသည်လက်ရှိတွင်လည်းမရှိရာအဘို့အခွအေနမြေားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အခြားကုသမှုနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲရသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုနာတာရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်အတူလူနာအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုစိတ်ကျန်းမာရေးဖြစ်ပြီးဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သော sarcoidosis အဖြစ်နာတာရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်အတူလူနာထိခိုက်စေနိုင်သောအရာကရှင်းပြသည်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်နောက်ထပ်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကြည့်ဖို့ဘယ်မှာပေါ်အကြံပေးချက်များကိုကူညီအသုံးဝင်သော tool များကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအတွေ့အကြုံကို sarcoidosis နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှစ်ဦးစလုံးပြဿနာများနှင့်အတူလူတွေကိုပြောနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာသူ SarcoidosisUK သူနာပြုဂျဲနီ၏အကူအညီဖြင့်ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးသင့်ရဲ့, စိတ်ခံစားမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးသုခချမ်းသာတို့ပါဝင်သည်။ ဒါဟာခံစားရနှင့်ပြုမူ, သင်ထင်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဒါကောင်းမကောင်း, သင်ဘဝသငျသညျမှာအပစ်အရာခပ်သိမ်းကိုကိုင်တွယ်ပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးအမြဲအတူတူနေဖို့မခွအေနမြေားသင်၏အသက်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တဆင့်ကိုပြောင်းလဲအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သငျသညျစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, သင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ : အတော်များများအချက်များအပါအဝင်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအထောက်အကူပြု
အသုံးအများဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် bi-ဝင်ရိုးစွန်းရောဂါပါဝင်သည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဘုံဖြစ်ကြပြီးသူတို့နှင့်အတူနေထိုင်နေကအရမ်းခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အကူအညီအများကြီး is available, see further down this page. People with mental health problems can get better and many recover လုံးဝ။
the anxiety and confusion ofanew diagnosis, ဒါမှမဟုတ်ရောဂါရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဘုံဖြစ်ကြပြီးဖြစ်ကြောင်းသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်က သာမန် တုံ့ပြန်မှု စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ခက်ခဲအခြေအနေများဖြစ်သည်။
သငျသညျစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့်အကျပ်အတည်းအဖွဲ့အရေအတွက်က (သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးအကျပ်အတည်းအတွက်ဖုန်းခေါ်တဲ့သူအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးမယ့်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်) ရှိပြီဆိုပါက, သူတို့ကိုခေါ်ပါ။
သငျသညျအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ခဲ့လျှင် 111 ပေါ်တွင် NHS ခေါ်ပါသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဆရာဝန်ဆက်သွယ်ပါ။ ဒါဟာအရေးပေါ်င်လြှငျ, 999 ကိုခေါ်ပါ။
ရှမာရိ သငျသညျစိတ်ကျန်းမာရေးအပါအဝင်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. လျှို့ဝှက်စကားပြောရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကနေအကျိုးခံစားရဖို့သတ်သေဖြစ်ရန်မလိုပါ။ 116 123 သို့မဟုတ်အီးမေးလ် jo@samaritans.org အပေါ်အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။
စိတ်ကျန်းမာရေးမေတ္တာစိတ်တစ်ခုရှိပါတယ် အရေးပေါ်အကူအညီနဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာ သငျသညျခက်ခဲအတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ။
အဆင့် 1: စိတ်ကျန်းမာရေးကိုနားလည်နှငျ့သငျရှိစေခြင်းငှါမဆိုရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအသိအမှတ်မပြု။ သင်ပိုမိုနားလည်ကူညီပေးဖို့ tools များနှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြင်ပလင့်များကိုသုံးပါ။
အဆင့် 2: Talk to someone about how you feel! Partner, friend, family member, colleague, SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု or another confidential support line.
အဆင့် 3: Consult your family doctor or make an appointment withacounsellor. With appropriate support, you can identify mental health conditions and explore treatment options, such as medications or counselling.
ထောက်ပံ့ နှင့်မေတ္တာကနေသတင်းအချက်အလက်တွေ အဘယ်သူမျှမထိတ်လန့်။
နားထောင်ခြင်းနှင့်ထံမှထောက်ခံမှု အာကာသအသက်ရှူခြင်း (စကော့တလန်သာ) ။
ကို Cကနေ onfidential စိတ်ခံစားမှုထောက်ခံမှု Supportline ။
ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များ mentalhealth.org ။
NHS Self-အကူအညီနဲ့လက်ကမ်းစာစောင်များ ဘာသာရပ်များ၏အကွာအဝေးပေါ်, စိုးရိမ်ပူပန်, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့အနိမျ့ Mood, ပြဿနာများ Sleeping နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပါအဝငျ။
သငျသညျ sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်နေနေလျှင်, NHS ရေရှည်အခွအေနေအကဲဖြတ် ခွင့်ရှိသည်စေခြင်းငှါအဘယျသို့အကူအညီနှငျ့သငျသညျကိုထောကျပံ့သငျသညျပွောမညျ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေနေအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သင်စိတ်ကြိုက်အကြံဉာဏ်နှင့်တစ်ဦး print ထုတ်လို့ရတဲ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအားငါပေးမည်။
ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဗြိတိန် သာယာဝပြောရေးတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်တဲ့အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက်သင်ကြားပေးသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ: အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူလူနာများအစီအစဉ်မဆိုရေရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်အတူနေထိုင်နေသောလူများအတွက်အခမဲ့ Self-စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ sarcoidosis နှင့်အတူလူခက်ခဲစိတ်ခံစားမှု, အပန်းဖြေနည်းစနစ်, action ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဘုံလက္ခဏာတွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အပါအဝင်အထောကျအကူရှာတွေ့စေခြင်းငှါအကြောင်းအရာများအများကြီးဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာအင်္ဂလန်ရဲ့နေရာအများအပြားမှာရရှိနိုင်မယ့်, ဒါကြောင့်သင်အနီးရှိသင်တန်းရှိတယ်လျှင်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီသို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်ခွဲစိတ်တောင်းဆိုနေတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အခြားဒေသတွေမှာဥပမာအသက်ရှူပြဿနာများအတွက်, များသောအားဖြင့်ခေါ်တော်မူမိမိကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ, ဒါမှမဟုတ်အထူးသဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူလူများအတွက်အစီအစဉ်များဆင်တူအစီအစဉ်များရှိနိုင်ပါသည်။
ဝေလနယ်: EPP Cymru တစ်ပြေး နာတာရှည်ရောဂါကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်, ဝေလနယ်များတွင်အွန်လိုင်းမှဟုတ်ပါတယ်, အပါအဝငျ။
စကော့တလန်: အဆိုပါ Scottish Recovery Network has information on mental health self-management. They describe it as working with people to provide the right support at the right time to enable people to choose how they want to live.
Having sarcoidosis (or waiting foradiagnosis) can be tough, and some people turn to alcohol or other substances (drugs) asaway of coping. Many of these substances, including alcohol, may affect your mental health and can actually increase anxiety and stress. There’s more information on alcohol and mental health on the Drinkaware က်ဘ်ဆိုက်.
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ: Drinkline: 0300 123 1110 နှင့် ပွင့်လင်းသော (မူးယစ်ဆေး): 0300 123 6600
စကော့တလန်: Drinkline: 08007314 314 နှင့် အဆိုပါရမှတ်ကိုသိ (မူးယစ်ဆေး): 0800 587 5879
ဝေလနယ်: Dan247: 0808 808 2234 (alcohol and drugs)
မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်: စွဲ ni: 028 9066 4434 (alcohol and drugs)
စိတ်ကျန်းမာရေး Sarcoidosis လူနာများထိခိုက်ဘို့ရှိတယ်အဘယ်အရာကိုအထောက်အထားရှိသနည်း
ထိုကဲ့သို့သော sarcoidosis အဖြစ်ရေရှည်အခြေအနေနှင့်အတူသူများသည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာ-ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောရေရှည်အခြေအနေများနှင့်အတူပြည်သူ့ရေရှည်အခြေအနေ (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း, 2007) မပါဘဲတွေထက်စိတ်ကျဝေဒနာကိုခံစားရဖို့ခုနစ်ကြိမ်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ထံမှနာတာရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုထွက်ရှာမည် mentalhealth.org ။
အဆိုပါ Read ရှားပါးရောဂါဗြိတိန်အစီရင်ခံစာ ရှားရှားပါးပါးအခြေအနေနှင့်အတူနေထိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်ရှိပါတယ်။
ကော့, အီး, Donohue, JF, ဘရောင်း, CD, Kataria, YP, & ယုဒသန်, MA (2004) ။ sarcoidosis နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များ၏အသက်ကနျြးမာရေး-related အရည်အသွေးကို။ သေတ္တာ, 125(3), 997-1004.
Chang က, ခ, Steimel, ဂျေ, Moller, DR, Baughman, RP, ယုဒသန် MA, Yeager Jr, အိပ်ချ်, ... & Rand, CS (2001) ။ sarcoidosis အတွက်စီးပွားပျက်ကပ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်အရေးပါစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာအမေရိကန်ဂျာနယ်, 163(2), 329-334.
Goracci, အေ, Fagiolini, အေ, Martinucci, အမ်, Calossi, အက်စ်, ရော့စီ, အက်စ်, Santomauro, တီ ... & Pieroni, MG (2008) ။ sarcoidosis အတွက်အသက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏အရည်အသွေး။ အထွေထွေဆေးရုံ Psychiatry, 30(5), 441-445.